बढ्दै गएको अराजकता
Aakar November 28, 2008
बन्द ! बन्द को अर्थ थाहा नपाउने अनि बन्द नभोग्ने नेपाली कोही छैन होला । बन्द महिना मा कतिपटक होला ? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् । मलाई थाहा छ तर तपाई को अनुमान मिल्नेवाला छैन कारण महिना मा कतिदिन बन्द हैन, कतिदिन खुल्ला हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु उचित होला । अब सायद, प्रश्न केही सजिलो भयो कि ?
लोकतन्त्र सँगै, छाडातन्त्र अनि अराजकतन्त्र पनि भित्रिएछ, हाम्रो नेपाल मा थाहा नै नपाइ । अनि हामीलाई नराम्रोसँग गाँजिरहेछ, यही छाडातन्त्र र अराजकताले । लोकतन्त्रलाई यहाँ गलत व्याख्या गरिँदैछ, अराजकतालाई बढावा दिँइदैछ । यस्तो अराजकता बढ्दैगएमा, मुलुक मा ठूलो दुर्घटना अवश्य हुनेछ, यसमा कुनै दुईमत नहोला ।
बन्द किन हुन्छ, अनि के कारण ले हुन्छ । मैले पहिले नै लेखिसकेको छु, एकपटक यहाँ हेर्नुहोला है, धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ । भन्दिहालौँ, “बन्द” भन्ने पोष्ट कान्तिपुर एफएम बाट बजिसकेको छ, अनि डामाडोल डटकम मा पनि छापिएको छ ।
बन्द को बिरोध मा कतिपटक लेखियो होला, कतिपटक कुरा गरियो होला, अनि कति पटक त्यस्ता समूहलाई सम्झाइयो होला अनि, हप्काइयो होला, अनि कतिपटक प्रतिबद्धता पनि लिन लगाइयो होला । तर “काग कराउँदैछ, पिना सुक्दै छ” भनेजस्तो भएको छ ।
साला, अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्नुछ, जनतालाई दु:ख र सास्ति दिनुछ, अझ उसकै ठूलो स्वर, के लुटेर ल्याएको छ सम्पत्ति छ ?
बन्द गर्न यहाँ अब केही कारण को आवश्यकता पर्दैन । अस्ति वाइसिएल ले मार्‍यो भनेर बबाल मच्चिएको थियो, अनि हिजो अर्का दुई किशोर मृत भेटिए भनेर बन्द गराएको छ । हैन, यो बन्द भन्ने कुरा किन यति सस्तो भएको हो । एउटा ले दु:ख पायो भनेर, किन त्यो भन्दा बढी सास्ति अरुलाई दिइन्छ ??? के यहाँ बन्द नगरी कुनै कुरा को पनि समाधान हुँदैन र ? सायद यतिसारो, कुनै देशमा पनि हुँदैन होला । सँधैको सास्ति छ यहाँ, सँधैको बन्द छ यहाँ ।
बन्द को बिरोध मा अनि बन्द को बारेमा म लेख्न पनि नसक्ने भैसकेको छु, कारण नेपाल को इतिहासमा सबैभन्दा बढि यही “बन्द” को सम्बन्ध मा लेखिएको छ होला । यही बन्द को बिरोधमा लेखिएको छ, बन्द कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ । बन्द नगरौँ भनेर हजारौँ पटक भनिएको छ । यही बन्द को कारण, “आन्दोलन, बिरोध कार्यक्रम” सबैको स्वरुप फेरीएको छ । आन्दोलन र विरोध को यहाँ सिधै अर्थ हुन्छ: “बन्द” । अनि बन्द को अर्थ हुन्छ, ढुंगामुढा, टायर, नारा जुलुस, तोसफोड, सवारी साधनमा आगजनि … ।
अस्ति नेपाल साप्ताहिक मा पढेको थिँए, एउटा को पाठक प्रतिक्रिया । जहाँ प्रतिक्रिया थियो, पोहोर लाहान मा भएको तोडफोड र आगजनि को सम्बन्ध मा ! सँगै फोटो थियो, जहाँ दर्जनौँ गाडिहरु लहरै जलिरहेका थिए, करोडौँ को सम्पत्ति क्षणभर मै सखाप भैरहेको थियो । अनि फोटो क्याप्सन थियो, “लाहान विध्वंस” भन्दै । अनि त्यही फोटो को सम्बन्धमा पाठक प्रतिक्रिया आएको थियो, नेपाल साप्ताहिक मा, खुबै गर्वका साथ, “यो त हाम्रो, आफ्नो हकहितको लागि भएको आन्दोलन थियो, किन लाहान विध्वंश भनेर क्याप्सन दिइयो ?” प्रतिक्रिया पढेर झनक्क रिस उठेर आयो । “साला, अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्नुछ, जनतालाई दु:ख र सास्ति दिनुछ, अझ उसकै ठूलो स्वर, के लुटेर ल्याएको छ सम्पत्ति छ ? यस्तालाई त सिधै खोरमा लगेर जाक्नुपर्ने ! त्यत्रा करोडौँ को सम्पत्ति जलिरहेछ, लहरै गाडिहरुमा आगो लगाइएको छ, अझ विध्वंश हैन भन्दैछ” मनमनै म निकै मुर्मुरिएँ । लाइब्रेरीमा पत्रिका हेर्दैथिएँ, मलाई साह्रै रिस उठेर आयो, कन्पारो तातेर आयो, अनि पत्रिका को तेस्रो पाना बाट नै पत्रिका पढ्न छाडेर, म कोठातिर लागेँ । राती ननिदाउन्जेल सम्म मुड अफ भएको थियो, त्यही कारण ले ।
सँधै हुने गरेको बन्द को कारण यही बन्द को बारेमा “नेपाल बन्द डटकम” ले अपडेट गर्ने गरेको छ । यहाँ एउटा फोटो छ, फोटो हेर्नुस् र भन्नुस्, नेपाल कुन दिन चाँहि खुल्ला छ । यो यही नोभेम्बर २००८ को बन्द को सेड्युल हो । यो महिना एकैदिन ७ वटा सम्मसंगठन को बन्द पनि रहेछ । अनि यो सेड्युल ले सकेसम्म देशैभरिको बन्द समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
अब आफैँ निर्णय गर्नुहोस्, भन्नोहोस्, यो बन्द को बारेमा ! के यस्तो देश अरु कुनै छ, जहाँ महिनैभरि बन्द हुन्छ । के यहाँ जसलाई जे गर्न पनि छुट छ ??? यदि छुट छैन भने, सरकारले जुनसुकै संगठन होस्, या जुनसुकै व्यक्ति होस, या बन्द गर्ने जुनसुकै कारण होस्, बन्द आह्वानकर्ताहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरेर आम नेपाली जनतालाई सुखपुर्वक बाँच्न दिनुपर्‍यो । केही दिन मात्र पनि सरकार ले कडाइ गर्ने हो भने, यस्तो अराजकता हराएर जान्थ्यो कि ???
ठरकि दादा November 28, 2008 at 9:32 AM
सरकारले कडाई गरे त हुने हो तर यहाको कडाई त यस्तै त हो नी!। आफू सत्तामा बस्दा बन्दको बिरोध गर्ने र सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै बोरोधको लागी बन्द गर्ने ।
मेले पनि यो बिषयमा केहि समय अगाडी लेखेको थिएँ जुन यहा छ।
Yumesh Pulami November 28, 2008 at 1:00 PM
K garne Aakar Ji , Kaslai K bhan ne banda le desh laai nai mand banaisakyo.............
...bhuj ne le kura na bujhe pa6i
...sun ne le kura na sune pa6i
Dilip Acharya November 28, 2008 at 5:23 PM
सबै दलहरुले सामुहिक रुपमा बन्द नगर्ने प्रतिबद्दता नगरेसम्म बन्द 'बन्द' हुने देखींदैन । अनी सबै दलले मिलेर त्यसरी बन्द लाई 'बन्द' गर्लान जस्तो स्थिति पनि देखीदैन।
किनकी सबै दलका नेताहरु आफू सत्ताबाट बाहिरिने बित्तीकै बन्दका पूजारि हुन्छन अनी सत्तामा पुग्न र खुट्टा तान्न उनिहरुलाई यो 'रामबाण' लाग्न थाल्छ ।
बन्दलाई 'बन्द' गराउन नेतामा नैतीकता चहिन्छ । जुन हाम्रा नेताहरुमा छँदै छैन ।
Prabesh November 29, 2008 at 7:02 PM
हामी पनि उस्तै हौँ । भोलि बन्द भएपनि हुन्थ्यो भनेर कामना गरेर बस्छौँ पढ्नका अल्छीले !!!!
उपाय छ यस्को बन्द गरौ हाम्रो खोक्रो राष्ट्रियता को बखान र सिधै बेचुम यस्लाई कुनै धनी देश सामु .....
के सोच्नु हुन्छ ??? नेपाल अहिले चाँही बेचिएकै छैन ??? छ हजुर छ तपाईं हामी ले नदेखिने गरी भित्र भित्रै कसै कसै को मात्र पेट भरिदै .....
यसरी घुमाउरो तरिकाले बेचिनु भन्दा सिधै बेच्दा कम्से कम सबै को atleast पेट त भरिन्थ्यो कि ?????
किन दुई चार जना को पेट भर्न हामी राष्ट्रियता को झुठो नारा लगाइ रहने ????
Anonymous November 30, 2008 at 7:40 PM
Some where I am with उजेली ji. God know why few people love to support it.
ametya November 12, 2010 at 4:34 AM
उजेली November 12, 2010 at 4:34 AM